Sida loogu badalo buraashkeyga .TPL ilaa .ABR gudaha Photoshop | Abuurista khadka tooska ah
Sida loogu badalo buraashkeyga .TPL ilaa .ABR gudaha Photoshop
Haddaan uun soo dejino cajiib burush iyo waxaan layaabeen qaabkeedu sidii lafilay. waxaanan dooneynaa inaan ogaano sida aan qaabkan ugu soo waaridi karno Photoshop iyo sidaan ugu badali karno .abr, hoos ayaan kuugu sharaxi doonaa.
Si aan ugu soo dhoofino burushkeena qaab TTPL ah Adobe Photoshop, waxa ugu horeeya ee ay tahay inaan sameyno waa burushkeena kuxir gal gal, lagana soocay feylasha kale Ama waan ku badbaadin karnaa gudaha galka barnaamijka haddii ay noogu habboon tahay markii aan go'aansanno inaan raadinno iyaga mustaqbalka, si loo sameeyo nuqulkan oo aan ugu dhajino faylalkayaga waddada soo socota:
Faylasha Barnaamijka> Adobe> Adobe Photoshop (midka aad haysato)> Presets
Kadib waxaan fureynaa Adobe Photoshop oo waxaan aadeynaa tabta Tafatir> Horudhac ah> Soo-dhoofinta / Soo-dejinta.
Waxaan halkaan gujineynaa daaqad la mid ah ta aan ku aragno sawirka ayaa furi doonta. Waxaan gujineynaa tabta > soo dejisan horena
Kadib waxaan aadeynaa geeska bidix ee hoose oo guji > dooro faylka soo dejinta, daaqad cusub ayaa furi doonta meesha aan ku raadinayno galka ay kujiraan burushkeena qaab tpl qaab ah.
Markaan doorano, waxay u muuqan doontaa, sida ku muuqata sawirka, aagga bidix. Haddii aan mid uun haysanno, sida kiiskeyga, waxaan gujinnaa > kudar dhamaan ama waxaan dooraneynaa feylka oo waxaan gujineynaa falaarta dhexe ee tilmaameysa midigta si aad ugudhaqaajiso setinka aagga saxda ah. Haddii aan haysanno dhowr nooc oo aanan dooneyn inaan dhammaantood isku darno, waa inaan dooranno kuwa aan dooneyno oo aan gujino isla falaarta dhexe ee midigta u tilmaameysa.
Markii aan horeyba ugu darnay, guji > soo dejisan horena
Hadda waa inaan xir Photoshop oo dib loo furo si loogu raro faylasha la soo dhoofiyay.
Hadda waxaan tagnaa tabta > Daaqad waana raadineynaa > qalab hore oo waxaan gujineynaa doorashadan. Gudiga qalabka hore ayaa markaa furi doona.
Si aad ugu aragto burushkeena qeybta hore ee qalabka waxaa lagama maarmaan ah inaan heysano qalabka burushka ee firfircoon. Waxaan beddeli karnaa buraashka lagu rakibay aaladaha horay loo qorsheeyay ama waxaan ku dari karnaa noocyo badan adigoo gujinaya geeska midig ee kore ee guddiga qalabka horay loo aasaasay iyo xulashada xirmooyinka burushyada aan dooneyno inaan ku darno.
Waxaan mar hore u isticmaali karnaa buraashkeena qaab .tpl, laakiin haddii aan rabno inaan burushkeena ku lahaano buraashka buraashka, taasi waa, sida .abr, waa inaan raacnaa tillaabooyinka hoos lagu sharxay.
Sida loogu beddelo TPL buraashka ABR
Waxaan tirtirnaa dhammaan burushyada aan ku haysanno guddigayaga burushyada (.abr), illaa aan dooneyno inaan ku biirno burushyada cusub xirmo burush kale. Laakiin, haddii waxa aan dooneyno ay tahay inaan helno xirmo isku mid ah burushyada.tpl ee .abr, tan ugu fiican ayaa ah ka saar dhammaan burushyada buraashka buraashka oo bilow inaad ku darto mid mid burushyada qaabka .tpl ee aan ku leenahay guddiga qalabka hore.
Waxaan madhineynaa daaqadeena burushka si aan u abuurno xirmada cusub.
Si tan loo sameeyo waxaan aadeynaa qeybta> qalabka horay loo dejiyay iyo iyadoo qalabka burushka uu firfircoon yahay, waxaan doorannaa buraashka ugu horreeya.
Hadda waxaan gujineynaa guddiga> caday (Haddii aynaan furmin, si loo furo waxaan aadeynaa> Daaqad> caday oo calaamadee) waxaan tagnaa geeska midig ee kore iyo waxaan gujineynaa astaamaha ikhtiyaariyada badan iyo menu-ka furmaya waxaan calaamadeyneynaa> qiimaha burushka cusub. Daaqad ayaa furmeysa halkaas oo aan ugu magacdari karno burushka haddii aan doono oo aan gujino > Waayahay.
Sidan ayaan ku haysannaa Waxaan kaliya u badalnay burushkeena.tpl qaab .abr. In kasta oo haddii aan haysanno burushyo nagu filan ay inagu qaadan doonto xoogaa inaan dhammaantood ku wada dhaafeyno, waa hab lagu haysto xirmooyinkayaga .tpl .abr.
Markaan helno dhammaan burushyada oo loo beddelo .abr, kaliya ayaynu badbaadin karnaa. Si tan loo sameeyo, guddiga meesha aan ku nimid burushkeena waxaan gujineynaa geeska midig ee kore, waxaan raadineynaa ikhtiyaarka lagu badbaadiyo burushyada waana ku dhajinaa. Daaqad ayaa furi doonta halka aan dib ugu magacaabi karno xirmadeena oo aan dooran karno halka aan ku keydin karno.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Photoshop » Sida loogu badalo buraashkeyga .TPL ilaa .ABR gudaha Photoshop
Aad ayey ii anfacday, mahadsanid !!